Mofon’aina 22 Septambra 2014
Misy fampianarana atolotr’i Jesoa eto ny amin’ ny fijoroana ho vavolomben’izay nandray famonjena. Fa na dia te hanara-dia Azy aza ilay marary nositranina dia hoy Izy : modia ihany any an-tranonao… Nahoana ? satria ny fitoriana ny famonjena, dia :
Miainga ao amin’ ny ankohonana : (and.19)
Tsotra ny valiteny nomen’i Jesoa eto : modia any amin’ ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra nataon’ny Tompo taminao…Izany hoe tonga mpitory ity lehilahy nandray fanasitranana ka ny ao an-trano no hanombohana izany. Sitrana izy noho i Jesoa. Fampianarana ho antsika koa izany, mandrakariva dia adino na tavela mihitsy ny ao an-trano, ny havana, tsy mba mandre ny famonjen’ Andriamanitra nasehony antsika. Tadidio ny baikon’i Jesoa eto.
Mihitatra any amin’ ny fiaraha-monina : (and.20)
Raha niala teo anatrehan’i Jesoa ilay lehilahy nositraniny, tsy nionona tamin’ ny filazana tao amin’ ny ankohonany ny famonjena nentin’i Jesoa ho azy fa nambarany tamin’ ny olona rehetra izany. Araka ny voalaza eto, tonga hatrany Dekapolisy izy nitory ny famonjen’ Andriamanitra azy teo amin’ ny olona eo ambany vahohon’i Satana. Izany no fitoriana ny Filazantsaran’ny famonjena, ary toetra tsara halain-tahaka ho antsika ankehitriny. Itaro ny asa fitoriana ny famonjen’i Kristy. Tsy ampy amin’ ny iraka nomen’ny Tompo antsika ny fandresen-dahatra ny ao anatin’ny ankohonantsika.
Nahoana isika no miahotra amin’ ny fanambarana ny famonjena nasehon’ny Tompo antsika ?